Touring Northern Italy ngu zemininingwane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Qeqesha Ukuhamba Italy > Touring Northern Italy ngu zemininingwane
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 11/02/2020)
Italy is one of the most popular countries in Europe to visit because of the variety of izindawo ngaphakathi yayo imingcele. Northern Italy hotspot uNdunankulu uma kuziwa isiko Italy, Kuningi zabahamba ukubona wenze. Kungakhathaliseki izibonelo zalokho iwayini elimnandi futhi udla ku eziphambili emhlabeni cuisine noma ukuhlola lasendulo izinqaba futhi amasonto, kule ndawo izipesheli okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele ukuthi uzongithanda. Kukhona inala izindawo ukuhlola e Northern Italy, ngakho uma une isonto elilodwa noma amabili ukuchitha e-Italy, ucindezelwe ukuthola ezinye izindawo captivate wena. Nazi ezimbalwa iziphakamiso zezindawo ukuvakashela lapho babuka Northern Italy ngesitimela.
Begin your Touring Northern Italy By Train e Milan
Qala ukuvakasha kwakho ku Northern Italy e-Milan, fashion dolobha zomhlaba. I nomuzi ugcwele emangalisa Renaissance izakhiwo, amasonto ezithandekayo-class emhlabeni imisebenzi yobuciko. Izivakashi Ungakhombisa futhi ukuthatha uhambo lwezinsuku kuya amachibi Italian futhi Wik Alps esifundeni kusuka kule wedolobha fabulous. Milan futhi iyikhaya Milan Central, futhi ubhekwa omunye European enhle kakhulu zezitimela. Lena indawo elungile ukuqala uhambo lwakho Northern Italy.
La Spezia Milan Izitimela
Parma Milan Izitimela
Salerno Milan Izitimela
Uhambo ngesitimela kusuka Milan Venice kuyinto amahora ngokuvamile amabili nesigamu, with plenty of kwenkundla isitimela abahambi ungajabulela kusukela ukuthutha iwindi lakho. Kusukela ngesikhathi ushiya esiteshini sesitimela e-Venice, ungakwazi ukubamba amazwibela omkhulu Grand Canal, lapho zonke uhlobo watercraft kungabonwa ngomkhumbi by. Venice yakhiwa 118 iziqhingi zixhunywe amabhuloho futhi ahlukaniswe emiseleni. Lo muzi omangalisayo Yaziwa ubuhle bayo, izakhiwo, yobuciko kanye cobblestone ezitaladini. Traveller akakwazi ukuba ukuthandana nalo kulesi sifunda enchanted. Touring Northern Italy ngesitimela ayiphelele ngaphandle ukuvakashelwa Venice.
Florence, edumile ekuvuselelweni idolobha, itholakala nje amahora amathathu ngesitimela Venice. Uma usufinyelela kule ndawo, cishe njalo indawo ebaluleke kakhulu ngaphakathi ukuhamba ibanga kusuka esiteshini sesitimela. Njengoba inhloko-dolobha Tuscany esifundeni, Florence inama ukudla amazing kanye iwayini, kanye iminyuziyamu lomhlaba. Vakashela amasayithi yisakhiwo sodumo, kuhlanganise esinesithunzi Ponte Vecchio yaziwa nangokuthi 'Old Ibhuloho', the ezinde Florence Duomo namatshe aqoshiwe kaMichelangelo kaDavide.
Cinque Terra – Touring Northern Italy ngu zemininingwane
Yenza Cinque Terra stop sakho sokugcina – kule ndawo emangalisa kuphela amahora ambalwa ngesitimela Florence. Cinque Terra ayinakho iminyuziyamu noma esiphawulekayo mlando amasayithi kodwa ingxenye okuphawulekayo Riviera Italian ukuthi ushiywe isetshenzwe. Ngemva izinsuku babuka Northern Italy ngesitimela, lena indawo ephelele ukujabulela Italy yemvelo landscape. Ugu inamagquma inhlanganisela emaweni futhi izivini kuhle nge emihlanu amahle kude okudotshwa.
Reggio Emilia ukuze Levanto Izitimela
Genoa ukuze Levanto Izitimela
Sestri Levante ukuze Levanto Izitimela
Parma ukuze Levanto Izitimela
Emadolobha axhunyiwe kuphela ngesikebhe, izintaba izindlela futhi yebo isitimela imigqa. Hlola amawa futhi amabhishi futhi ifake uphethiloli kwelinye langa amathilomu ophezulu on headlands enamadwala esibheke itheku. Le ndawo enhle ngempela umoya ukuthatha – indawo elungile kabusha lingakunika amandla. Kusuka lapha ungathatha isitimela emuva Milan lapho usungaqala uhambo lakho lasekhaya.
Ingabe bezobuka Northern Italy ngesitimela? Let us know the favorite places that you have visited by tweeting us at @SaveATrain! sikulo futhi esebenzayo kuzo zonke iziteshi zomphakathi, Hlola Saveatrain
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ke Chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftouring-northern-italy-by-train%2F – (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#cinqueterra E-Italy milan northitaly travelflorence travelitaly travelvenice